TV-yada Soomaaliyeed: Taran Tayadoodu Taban Tahay
You are here: Home Home TV-yada Soomaaliyeed: Taran Tayadoodu Taban Tahay
Jadwal hagaagsan oo la isku hallayn karo ma laha midkoodna, marka laga reebo saacadaha ay wararka soo daayaan. Xayaysiis aad ku dhego-barjoobayso oo aad indho-daraandar ka qaadayso, oo haddana malahayga aanay ka maarmayn, marka laga tago, wixii soo hadhaaba waa barnaamij. Mid midka ay danta gaarka ah ka leeyihiin ayay ku qoraan ama ku sheegaanba Barnaamij Gaar ah inta ay heesaha caanka ah mid ka mid ah u sadqeeyaan oo ay miyuusig uga dhigaan oo ku qaleeyaan. Ogaansho la’aan uma yeelaan sidaas ee mararka qaarkood kii heesta qaadayay ama lahaa ayaa raalli kala noqda. Hadda barnaamijkaa gaarka laga dhigay, wax gaarnimadiisaa muujinayaa ma jiro. Cidda leh ama qofka leh ayaa lagu cammaynayaa si uu uga samro wixii adduun ahaa ee uu ku bixiyay. Qayb kale ayaa iyaduna ah tebinta Xaflado meelo kala geddisan lagu qabtay oo dadka ka hadlaya aad durdur moodayso oo weliba inta badan ay dumarku ka madhan yihiin.
Madaxda iyo shaashaduhuba ma jecla haweenka oo waa ay ku yar yihiin, haddana dhibta qoyska iyo qarankuba iyaga ayay ku dhacdaa. Bal adba!
Dadka shaashadaha qabsaday ma dhammaadaan. Habeen waa Qoor. Habeenno kale waa Qaar. Habeenka xiga waa ‘Qirin’. Habeenno kalae waa Qaran-qiir iyo Qaran-qaar. Sidaas ayuu Qaran-qaadna kuugu hadhay. Hadda intani waa in yar oo ‘Qa’-da’ ka kacda ee bal idinku xarfaha oo dhan mara.
Iyagu waxay aamminsan yihiin in qof kasta oo idaacad ka hadlaaba, TV-gana ka hadli karo oo ay CViiyada ku darsan karaan. Xaasha! Waa kala laba. Waa laba baab. In ay dadka qaarkii ku guulaystaanna xabka, ama laga yaabee. Haddaad u sii fiirsato se, waad dareemaysaa in ay wax ka dhiman yihiin kol ay dhar-xidhashadu kala dhantaalan tahay ama aanay kabuhuba direyska raaci karin. Hub-qaadka naftiisu waa ka badh gole-joogsiga. Bal u fiirsada, qof heesa oo aad maqal ahaan codkiisa aad u jeceshahay, ayaa laga yaabaa in aanad jeclaysan marka aad muuqaal ahaan u daawanayso ama aanad indhahaba siin karin. Qofku marka uu idaacadda ka hadlayo ayaad garanaysaa in uu makrifoonka la hadlayo, in uu isagu isla hadlayo iyo in uu dadka la hadlayo. Bal ka warrama qofka aad sidaa u garanayso oo shaashad kuu soo fadhiistana. Gole-joog-wanaaggu waa arrin kale oo mararka qaarkood qiimaheeda u leh fannaanka, siyaasiga iyo inta hadalka booshaaqda ee shaashadaha looga taag la’ yahayba.
Weriyayaashaa qaarkood ayaad arkaysaa sida ay ugu mashquulsan yihiin warqadda hor taal akhriskeeda. Markaas ayaad garanaysaa in aanay gaadhin heerarka ay haabanayaan weriyayaasha ay ka midka tahay Hodan Cali Cajabi oo aan marnaba indhaha ka qaadin ama ka libiqsan daawdayaasheeda. Warqad ay wax ka akhridaba uma baahna, lebbiskana wax qumman oo qurux badan oo aan sidaa u sii murugsanayn ayay ka qaadataa oo soo jiidasho iyo jalleecaba leh. Weji furan iyo daymo aanay indhuhuba ka didayn. La ye Hodan ayaa meel iska fadhida oo aan shaqayn. Bal ka warrama TViiyadeenna Hodan oo kale iyo qaar badan oo la mid ah u baahan waayay. Waxaasaa TViiyo la yidhaahdaa!
Ma weriye Leyla Careef oo Daad-madheedh ka soo warrantaa! Hadalkeedu sida luulida ayuu u taxan yahay. Wararka sawiran ee ay soo dirayso iskumaba dhejiso ee mus-dambeedka ayay ka soo warrantaa. Kalsooni la yaab leh ayay isku qabtaa.
Dadka weriyayaasha ah qaarkoodna waad arkaysaa oo warqadda akhriskeedii ayay ku daalayaan, markaas ayay isku daadanayaan.